kugadzirisa kuverizon & apos; s galaxy note 20 uye galaxy note 20 ultra inouraya bugs yakafa
Kuru Nhau & Ongororo Kwidziridzo kuVerizon & apos; s Galaxy Note 20 uye Galaxy Note 20 Ultra inouraya bugs yakafa
Kwidziridzo kuVerizon & apos; s Galaxy Note 20 uye Galaxy Note 20 Ultra inouraya bugs yakafa
Kana iwe & apos; re a Verizon mutengi ane yake Samsung Galaxy Note 20 kana Samsung Galaxy Note 20 Ultra , pane yekuvandudza yakamirira iwe. Don & apos; usave wakanyanya kufara sezvo ichi chisiri chikuru chekugadzirisa nezvimwe zvinotonhorera maficha. Sekutaura kunoita anotakura pane yayo webhusaiti, 'Verizon Wireless iri kufara kuzivisa software yekuvandudza yako kifaa. Iyi software yekuvandudza yakaedzwa kuti iwedzere mashandiro edhizaini, kugadzirisa nyaya dzinozivikanwa uye nekushandisa zvazvino zvidziviriro. Iyo Software Shanduro iri RP1A.200720.012.N986USQU1CTLA.
Kutaura nezve pamwedzi chengetedzo zvigamba, iyo Zvita 2020 vhezheni inouya neyekuvandudza. Verizon, pasi pechikamu chakanzi 'Chii & apos; chiri kuchinja' pawebhusaiti yayo, inoti 'Iyo yazvino software yekuvandudza inopa zvigadziriso zvehurongwa kuchombo chako.' Nguva yeKisimusi isati yatanga, Verizon yakaburitsa kunze kweiyo Android 11 / Imwe UI 3.0 kugadzirisa kuChiziviso 20 uye Chiziviso 20 Ultra zvinoreva kuti zvigadziriso zvitsva zvinogona kunge zviri zvigadziriso zveApple 11. Kuti uvandudze foni yako, kutanga unofanirwa kuona kuti iwe & apos; wakabatana zvakare kune yeWi-Fi chiratidzo kana uine yakasimba kubatana kune Verizon network. Uye ita shuwa kuti bhatiri riri pafoni yako rakabhadharwa zvizere usati watanga iyo yekuvandudza maitiro.
Kugadziridza iyo Galaxy Note 20 kana Galaxy Note 20 Ultra enda kuZvirongwa>Kugadziridza kweSystem>Tarisa uone kuvandudzwa kwesystem.Kana chishandiso chako chikawana nyowani software, tinya Rodha pasi izvozvi Kana wapedza, skrini ichaonekwa ichikupa zano kuti vhezheni itsva ye software yagadzirira kuiswa. Pombi Isa gadziriso. Inofungidzirwa software kurodha nguva ndeye maminetsi matanhatu kusvika gumi sekufungidzirwa kwesoftware yekuvandudza nguva. Chigadzirwa chichava nesimba pasi uye simba zvakare. Screen ichaonekwa ichitaura kuti kumisikidza kwapera. Tinya OK. Ndizvozvo chete zviripo kwazviri.
Rowkin Bit Charge Stereo mahedhifoni Ongororo
Iyo Google Android forogo: Google Play masevhisi, Android 4.4, uye iyo Nexus Zvakaitika
10 yakanakisa nhabvu / nhabvu mitambo yeApple neIOS